Rimwe Sangano reVarimi Rotsigira Hurongwa hweKubhadhara Vachena Vakatorerwa Minda
Kurume 22, 2016
Varimi vechitema vazhinji vakapiwa minda havana zvikuru zvavari kuita nayo
Rimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union (ZFU), rinoti rinotambira nemufaro hurongwa hwehurumende hwekuti varimi vatema vari mumapurazi akatorerwa vachena vabhadhare mitero ichashandiswa mukuripa vachena ava budiriro dzavakanga vaita pamapurazi avo.
Mukuru weZFU, VaPaul Zakariya vanoti kubhadhara zvivakwa nebudiriro zvakasiya zvaitwa nevachena ava kunopa varimi vechitema ava chiremera chekuti vakabhadhara zvavari kushandisa, kwete kuti vakaita zvekubvuta.
“Handiona sekuti chingave chinhu chingaremera vanhu kuti vave ne ownership yakadzika pamusoro peminda yavanenge vachishandisa. Idanho rinokwanisa kuti ritipe chiremera munharaunda yatinogara uyewo nepasi rose kuti vakanga varipo paminda iyoyo vakabhadharwa,” VaZakariya vanodaro.
VaZakariya vanoti kubhadhara kwavari kuita mari idzi kuburikidza nemitero iri kubhadhariswa varimi vakagariswa patsva ava hakusi kuti vari kutenga ivhu ravari kurima kwete.
“Varimiri vanenge vachibhadhara zvivakwa nebudiriro dzakaitwa nevachena ava, kwete kuti tiri kutenga ivhu redu, kwete.”
Mukutanga kwemwedzi uno gurukota rezveupfumi VaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti hurumende yakanga yave kutanga kuita ongororo mumapurazi kuti ione kukosha kwakaita budiriro dzakasiiwa nevachena vakatorerwa mapurazi ava.
Vakati izvi ndizvo zvinozovapa ruzivo rwekuti murimi oga oga obhadhara marii, uye murimi wechichena akabviswa papurazi apa anozopiwawo marii.
Kutanga muna 2000, vachena vanodarika zviuru zvina vanonzi vakabviswa zvine chisimba pamapurazi avo achipiwa kune vatema, asi minda mizhinji yakararira nekuda kwekushaiwa zvikwanisiro kwevarimi vatsva ava.
Hurukuro naVaPaul Zakariya